‘ဘေကွန် ပုဇွန်ကင်’ | Wutyee Food House
« ၀က်စတူး နှင့် မုန့်ညှင်း
အနောက်တိုင်းစတိုင် အားလူးကက်တလိပ်ကြော် »
December 14, 2011 by chowutyee ‘ဘေကွန် ပုဇွန်ကင်’
New Year & Chris-max မှာ လုပ်စားဖို့ နောက် အကင်တစ်မျိုးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ ဒါကတော့ ဘေကွန် ပုဇွန်လေးပါ။ ဘေကွန် ပုဇွန်ကင်ဟာ ပါတီပွဲတွေမှာ အပေါင်းသင်းစုံလင်စွာ လုပ်စားရင် အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ အကင်တစ်မျိုးပါပဲ။ လုပ်ရလည်း အရမ်းလွယ်ပြီ ပုဇွန်ကို ဘင်ကွန်နဲ့ ပတ်ပြီ ကင်တဲ့အတွက် မီးခိုးရနံ့လေးနှင့် အရမ်းစားလို့ကောင်းပါတယ်။ ထို့အပြင် ပင်စိမ်းလည်း ပါဝင်တာမို့ ပင်စိမ်းရနံ့လေးကို ရရှိမှာပါ။ အချိန်တိုအတွင်းမှာ လုပ်စားချင်လျှင် ရွေးချယ်သင့်တဲ့ ဟင်းလျာတစ်ခုပါပဲ။ တူတူလုပ်စားကြည့်ရအောင်…
ပုဇွန်ကျား ♦ ၁၅ကျပ်သား
ပင်စိမ်း ♦ ၁၂ရွက်
ဘေကွန် ♦ ၁၂ခု (၆-ရလက်မကြား ရှိရမည်)
၁။ ပုဇွန်ခေါင်းကို ဖြုတ်ပြီ အခွံနွာ ထား၍ ကျောအနည်းငယ် ခွဲထားပေးပါ။
၂။ ပြီးလျှင် ပုဇွန်ကို ၀ါးတံစို့များဖြင့် ပုံတွင် ပါသည့်အတိုင်း သီထားပေးပါ။
၃။ ထို့နောက် ပင်စိမ်း၂ခုကို ပုဇွန်ပေါ်တင်လိုက်ပါ။
၄။ ပုံတွင်ပါသည့်အတိုင်း ဘေကွန်ကို ပုဇွန်ပေါ်တွင် ပတ်ထားလိုက်ပါ။ ထိုနည်းအတိုင်း ကျန်ပုဇွန်များကို ဆက်လိပ်သွားပါ။
မှတ်ချက်။ ။ အကယ်၍ ဘေကွန်များ ပုဇွန်ပတ်ရန် အရွယ်အစားသေးနေလျှင် သွားကြိုးထိုးသံများဖြင့် အောက်မှာပါသည့် ပုံအတိုင်း ခိုင်အောင် ထိုးပေးပါ။
၆။ ထို့နောက် တဖက်ကို ၄-၇မိနစ်ကြား ထားပေးပြီမှ တဖက်ကို လှန်ပေးပါ။
ရ။ ပုဇွန် ဖြူပြီ တင်းလာရင် ကျက်ပါပြီ။
၈။ ဘေကွန်ပုဇွန်ကင်လေးများကို အရသာရှိရှိ သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ…
Tip: ကြက်၊ ၀က်၊ အမဲသားများကို ထိုနည်းအတိုင်း ပင်စိမ်း၊ ဘေကွန်ဖြင့်ပတ်ပြီ ကင်စားပါက အရသာကောင်းမွန်သည်ကို တွေ့ရသည်။
on December 15, 2011 at 1:10 am | Reply jue
ကျေးဇူးဘဲမမ ဘေကွန်ကိုဘယ်မှာဝယ်လိုရလဲ တစ်ချက်လောက်ပြောပြပါလား
on December 15, 2011 at 5:21 am | Reply chowutyee
CityMart မှာမေးဝယ်လို့ရပါတယ် jue..🙂
on December 15, 2011 at 5:00 am | Reply Soe Ei Ei Phyu
ဘေကွန်ဆိုတာ ဘာလဲဟင် မမ? ဘေကွန်ရရင် လုပ်စားကြည့်မယ်။ ကျေးဇူးပါနော်။
မမ Post ကို အမြဲ ဖတ်ဖြစ်တယ်။
ဘေကွန်ဆိုတာ ၀က်ပေါင်ခြောက်ကို ပြောတာပါ။ City Mart မှာ ဘေကွန်လို့ ပြောဝယ်လို့ရတယ်။ နိုင်ငံခြားကလာတဲ့ ဘေကွန်ဝယ်နော်၊ ဒီက လုပ်တဲ့ ဘေကွန်က မကောင်းဘူး.. အားပေးလို့ ၀တ်ရည်က အရမ်းကျေးဇူးပါ..🙂
on December 15, 2011 at 5:43 am | Reply yinthu
၀က်သားမစားရင်ရော မမ ဘာနဲ့ လိပ်ရမလဲနော်
on December 15, 2011 at 12:42 pm | Reply chowutyee
၀က်သားမစားရင်တော့ ဒီအကင် လုပ်လို့ မရဘူး ညီမ..
on December 15, 2011 at 10:28 am | Reply Cho Wut Hmone
look so delicious🙂amike sar bae….
on December 16, 2011 at 6:08 am | Reply Tin Moe Oo
ကောင်းမယ့် ပုံ လေးပဲ
on December 20, 2011 at 3:04 pm | Reply chowutyee
Yes it is really good taste..Plz try it..😛
on December 16, 2011 at 7:34 pm | Reply ခင်ယမုံ
[…] ‘ဘေကွန် ပုဇွန်ကင်’ (getacookrecipe.wordpress.com) […]
[…] December 14, 2011 ‘ဘေကွန် ပုဇွန်ကင်’ […]